Bacda Pizza, Boorsada Bixinta, Bacaha dahaaran, Bacda kulul - bakayle
Naftaada aamin oo isku mar na aamin.
Ku soo DHAWOOW DHAQANKA
JACAYL & DHAQAN
Bakaylaha Shenzhen Technology CO., LTD waxay u hoggaansamaysaa fikradda ah “iskaashi furan, mustaqbal guul leh” falsafadda ganacsiga tan iyo markii la helay.
Saldhigyada jihaynta suuqa iyo waayo -aragnimada isticmaalaha si ay u jebiyaan xaddidaadda warshadaha si joogto ah.
Warshadda qiimaha jumlada leh MOQ yar
Tayada tayada QC HALAL ISO9001 Kosher
Adeegga macmiilka 7*24h Adeeg (Jawaab 3-6h gudahood)
Muunad bilaash ah Iibso 1 hel 1 muunad bilaash ah
Si aad uga badiso filashooyinka macmiilka hadafka.
Qaad tartan oo kor u qaad tayada waddada.
Dooro badeecada aad jeceshahay
BIXINTA CUNTADA ...
Xidhmada Bacda Qaadashada Xidhmada Bixinta Dahaarka ...
Sideen kuu caawin karaa?
Sida ugu dhakhsaha badan ugu soo gudbiya wararkii ugu dambeeyay
Xagaaga, shirkado badan ayaa bilaabaya inay adeegsadaan bacaha dahaarka ee aan la tolanayn, gaar ahaan shirkadaha cuntada, maxaa yeelay baakadaha dahaarka leh ee aan tolka ahayn ayaa looga baahan yahay baakadaha cuntada sida caanaha iyo farmaajada. Si kastaba ha noqotee, cuntada ku hartay gudaha dahaarka marada-tolka ah ...
Bacaha aan la tollayn (sida caadiga ah loo yaqaan bacaha aan tolanayn) waa kuwo adag, qurux badan, neefsan kara oo dib loo isticmaali karo. Waxay yihiin wax soo saar cagaar ah. Laga bilaabo sii deynta amarka xadka caagga ah, bacda caaga ah ayaa si tartiib tartiib ah uga bixi doonta suuqa baakadaha ee maqaalka oo beddeli doonta ...
Doorashada bacda saxda ah ee pizza ayaa laga yaabaa inay adkaato oo qaado xoogaa tijaabo ah iyo khalad si loo helo bacda kuugu habboon, mararka qaarkoodna kharash aad u sarreeya. Halkan waxaa ah afarta su'aalood ee muhiimka ah ee laga jawaabayo ka hor intaadan gelin boorso gaar ah. Su'aalaha soo socda ee la isweydiiyo ka hor intaadan iibsan p ...